Xiaomi Mi 10 5G Blue (12GB/256GB) ~ ICT.com.mm
HomeXiaomi Mi 10 5G Blue (12GB/256GB)
Xiaomi Mi 10 5G Blue (12GB/256GB)
Display Size: 6.67 inches, 109.2 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) Resolution: 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~386 ppi density) Chipset: Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) GPU: Adreno 650 Operating System: Android... [Learn more]
Brand: XiaomiSKU: 190935N/ASee more: Mobile Phones, New Arrivals, Products, Shop, XiaomiFilter by: EDIT-ONE, Smartphones
Battery: Non-removable Li-Po 4780 mAh battery (Fast charging 30W)
Xiaomi Mi 10 ဟာ တကယ့်ကို အလန်းစား Feature တွေကို ထည့်သွင်းပေးလိုက်တဲ့ Flagship အဆင့်စမတ်ဖုန်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ 6.67” အရွယ်အစားရှိတဲ့မျက်နှာပြင်မှာ (1080x2340) resolution ရှိတဲ့ Super AMOLED Display အမျိုးအစားကို တပ်ဆင်ထားတာကြောင့် ပြိုင်ဘက်ကင်းတဲ့ ရောင်စုံအရည်အသွေးနဲ့ရုပ်ထွက်ကို ရရှိစေမှာပါ။ အစင်းရာတွေမထင်စေဖို့ Corning Gorilla Glass5နဲ့ ကာကွယ်ပေးထားပြီးကိုယ်ထည်ကို လှပတဲ့ အလူမီနီယမ်ဘေးဘောင်နဲ့ ကွပ်ပေးထားပါတယ်။ နောက်ကျောကင်မရာပိုင်းမှာ108 MP (wide), 13 MP (ultrawide),2MP(macro) နဲ့2MP (depth) စုစုပေါင်း ကင်မရာလေးလုံးကိုတပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ 108MP ရှိ Main ကင်မရာက အံ့ဩလောက်စရာအရည်အသွေးမြင့်မားတဲ့ပုံရိပ်တွေကို ရိုက်ကူးနိုင်ပြီး 4K နဲ့ 8K ဗီဒီယို ရိုက်ကူးမှုတွေအထိ ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။မြင်ကွင်းကျယ်ကင်မရာတွေက လှပတဲ့ရှုမျှော်ခင်းတွေကို အလွယ်တကူ ရိုက်ကူးနိုင်စေမှာဖြစ်ပြီးသင့်ရဲ့အမှတ်တရပုံရိပ်တွေကို အကောင်းဆုံးရိုက်ယူ သိမ်းဆည်းထားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ပြောစရာမရှိလောက်အောင် လှပပြီးကြည်လင်တဲ့ Selfie ဓာတ်ပုံတွေကို ရိုက်ကူးနိုင်ဖို့အတွက် 20MP ရှိ Selfie ကင်မရာကို မှန်မျက်နှာပြင်အတွင်းမှာ တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ System ပိုင်းအတွက် Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) chipset အထိုင်ပေါ်မှာ Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) processor နဲ့အတူ Adreno 650 ဂရပ်ဖစ်နဲ့ကြီးမားတဲ့ 8GB RAM တို့ကို တွဲဖက်တပ်ဆင်ထားတာကြောင့် အလျင်မြန်ဆုံး စွမ်းဆောင်ရည်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပြီး ဘယ်လို High End ဂိမ်းမျိုး၊ Application မျိုးကိုမဆို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ရုပ်ထွက်လှပစွာအသုံးပြုနိုင်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေတာအများအပြားကို စိတ်ကြိုက် ထည့်သွင်းနိုင်စေဖို့အတွက် Internal Storage – 128GB အထိ ပါဝင်ပါတယ်။ OS ပိုင်းမှာတော့ နောက်ဆုံးပေါ် Android ဗားရှင်းဖြစ်တဲ့Android 10, MIUI 11 နဲ့ အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အားကြာရှည်ခံတဲ့ 4780mAh Li-ion ဘတ္ထရီကိုအသုံးပြုထားပြီး ပုံမှန် Charging နဲ့ Wireless Charging နှစ်မျိုးလုံးက Fast Charging (30W)အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့အတွက် အချိန်တိုအတွင်း လျင်မြန်စွာ အားအပြည့်ပြန်သွင်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။အပြာရောင်နဲ့ မက်မွန်ရောင်တို့ဖြင့် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။
The 108MP camera brings its prowess to revolutionize smartphone videography by providing 8K video recording.With the powerful Pro mode and stereo sound, you are onlyafew taps away from creating professional videos.
Experience new heights in smartphone videography with 8K video combined with Pro mode.Functions like AE/AF Lock and Focus Peaking, provides you with more room for your creativity.
Total price:K840,000 K826,200
This item: Xiaomi Mi 10 5G Blue (12GB/256GB) K783,000